खल्ती डिजिटल वालेटबाट रु. २० रिचार्जमा आइफोन १२ जित्ने अवसर « Arthabazar.com
खल्ती डिजिटल वालेटबाट रु. २० रिचार्जमा आइफोन १२ जित्ने अवसर
प्रकाशित मिति : २३ पुष २०७७, बिहीबार ११:०५
काठमाडौँ । खल्ती डिजिटल मोबाइल वालेटले आफ्नो भाइबर समुदायमा जाेडिने व्यक्तिहरूका लागि “Khalti मा iPhone 12” अभियान मार्फत आइफाेन १२ जित्ने अवसर ल्याएकाे छ । यस अभियान अन्तर्गत खल्ती प्रयोगकर्ताहरुले बम्पर उपहारमा अहिले निक्कै प्रचारमा रहेको आइफाेन १२ पाउन सक्ने छन्।
यस याेजनामा सहभागीहुन खल्तीको भाइबर कम्युनिटीमा जाेडिएपछि वेवसाइट Khalti.com वा खल्ती मोबाइलएपको होमस्क्रिन मा रहेकाे खल्ती ‘बजार’ मा गइ “‘Khalti मा आइफाेन १२” क्याम्पेनमा गएर २० रूपैयाँ भुक्तानी गरी रिचार्ज गर्नपर्ने छ । विजेताकाे घाेषणा याेजना सकिएको ७ दिनपछि फेसबुक लाईभमा लक्की ड्र मार्फत गरिने खल्तीले जनाएकाे छ।
खल्ती डिजिटल वालेट नेपालको लाेकप्रिय पेमेन्ट गेटवे हो जसको उद्देश्य प्रयोगकर्ताको समय बचत गरी भुक्तानी र बैंकिंग कारोबार सहज साथै सरल गर्नु हो । ‘खल्ती’ वालेटको प्रयोग गरी ६०+ बैंकमा पैसा पठाउन सकिने साथै मोबाइल रिचार्ज, बिजुली, पानी, इन्टरनेट तथा डीटीएचको बिल भुक्तानी, फिल्म, प्लेन, इभेन्ट्स को टिकट खरिद, होटेल रुम बुकिङ गर्ने, इ–कमर्समार्फत किनिएको सामानको भुक्तानी गर्ने, दैनिक पत्रिकाहरुको ग्राहक–शुल्क तिर्ने, सरकारी कर तथा सेवा शुल्क तिर्ने जस्ता धेरै सेवाहरु लिन सकिन्छ । साथमा भुक्तानीमा पाइने क्यासब्याकको फाइदा उठाई रकम बचत गर्न पनि सकिन्छ। ‘खल्ती’का प्रयोगकर्ताहरुको संख्या १४ लाखभन्दा बढि छन् ।